Wasiirka amniga Oo Kormeeray kontaroolada & isgoosyada magaalada muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 28 April 2018 28 April 2018
Muqdisho ( mareeg news ) Wasiirka Wasaaradda Amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow iyo Taliyaasha Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa xalay kormeeray Baraha Kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxayna la kumliyeen Taliyaasha ku sugan goobahaasi iyo ciidamadooda.
Wasiir Islow oo la hadlay Ciidamada ayaa ku amaanay dadaalkooda waxa uuna ka dalbaday inay sii laba laabaan sugidda amaanka magaalada Muqdisho.
Taliyaasha Ciidamada Qalbaka Sida ee Kormeerka qeybta ka ahaa ayaa wasiirka u sheegay in habeen iyo maalin ay usoo jeedaan nabad galyada magaalada lana baaro gaadiidka Muqdisho soo galo, Saraakiisha ayaa sheegay inay ka hor tagayn qorshayaal badan oo ay shabaab ku soo gali lahaayeen gobalka Banaadir.
Sarkaal katirsan Ciidanka NISA Oo ku dhaawacmay qarax lagu xeray Gaari